Qiso Layaab Leh: Socdaalkeygii Xeebta Liido iyo wixii aan kusoo arkay zino iyo kuwa aflaam qaawan jiliyo - iftineducation.com
iftineducation.com – Shaleyna maalin ayey aheyd markii saaxiibkeey Hanad Yare iga dalbaday in aan ugu kaalmeeyo farxadiisa guurka waxaan maqli jiray “Liido Hotel” laakinse saakay ayaan sadarro xasuusta gala guntiga kaga soo ritay.
Gudaha markaan galay anagoo qosolka iyo sheekada aan saxda ku dhisneyn kabo kadhiganay markii lakala tagay caqdigii nikaaxana Alalaas ku dhamaaday ayaan inyar goobta ku haray si’aan ukaamilo kurbadii ka dambeysay dhaq dhaqleyntii arooska.
Waxaan udegay qeybta hoose ee badda xigta misna waaba baabuur cad cad iyo dhalinyaro isugu jiro rag iyo dumar sidey isugu dheganyihiin waxaad moodaa geedo isku baxay si maangal ah ayaan ugaabshay su’aasha oo dadkani xagey kayimaadeen? Odey jeylaani oo buuma keliya wato meel iidhow qamri kucabayo ayaa igu ag tufay jawaab aan la’ama kaagay Wuxuu yiri. ” Haa dhalinyaradani waa shaqaalaha shirkadaha Aflaamta Jinsiga suubiyo waxey ka yimaadeen Mareykanka iyo Faransiiska”.
“Wacdaro la yaab leh ayey halkaan ka dhigaan banaankan aad isha ku heyso ayey isugu tagaan Kaamerana waa loogu duubaa howshoodaan quruxda leh, Anigana maadaama aan ka duqoobay bood bood isha ayaan ka dhergaa” Jaylaani!!,Eeg Wasakhnimada Odaygaan wuxuu ku hadlayaa hadaladii Gaalada oo kale.
Intaan indhaha kor utaagay wejigana biigeeyay ayaan qalbiga ka gubtay xanaaq keligiis kaalmo manoqon karaa? Waxaan ku dhex lugeeyo toggagii islahadalka unbaan halmar arkay iyadoo leys carbinayo sida aay isugu afmudayaan waxaad arkeysaa adigoo kala garan la’ labada qof kan hadlayo.
Zino banaan taalo qoraxduna marqaati ka tahay Hirarka baddana ay ciil la hugmayaan,Dowladda madaxdooduna daaqadaha hotelka ayey kafiirsanayaan.
Markaan u adkeysan waayay damiir xumada meesha taallo ayaan carar lugteyda kadalbaday anigoo gacmaha tuurtuurayo sidii qof shinni ceyrsatay ayaan goobtii fisqiga ka hadaafay si aysan iigu dhicin lacnada kudul shubmeyso qoomkan duleysan.
Hotel Liido mar dambe lugteyda ilaahoow hageynin,Walle Ninkii rabo inuu runta muqdisho taalo arko idaacadaha ha iska dhaafo ee dhaayihiisa wax haku arko.
W/Q Jamaaludiin Oo Booqday Xeebta Liido